Siouxland Public Media News: Somali on Stitcher
Siouxland waxay isu diyaarineysaa Digniinta labaad ee Blizzard muddo seddex isbuuc ah
Siouxland waxay isu diyaarineysaa Digniinta labaad ee Blizzard muddo seddex isbuuc ah. Digniintu waxay bilaabmaysaa (bilaabatay) caawa lixda waxayna sii soconaysaa ilaa 6-da maqribnimo. Jimcaha. Saadaashu waxay ku baaqeysaa 3 illaa 8 inji labada maalmood, iyadoo dabeylaha dabeylisu sarreeyaan 60 mayl saacaddii. Sioux City waxay heli kartaa 5 inji. Codbixiyeyaasha Nebraska waxay heli karaan inay go'aan ka gaaraan inay xaddidayaan kharashka dowladda hoose sanadka soo socda iyadoo la tixraacayo soo jeedinta canshuurta guryaha ee cusub ee Gov. Pete Ricketts oo uu horgeeyay xildhibaanada intii uu ku guda jiray khudbadiisa gobolka maanta. Saraakiisha caafimaadka ee Degmada Dakota ayaa kujira wajiga xiga ee helitaanka talaalada COVID-19. Waaxda caafimaadka ayaa ku guda jirta sameynta ballan dadka waaweyn, 65 iyo wixii ka weyn. Qeybo badan oo ka mid ah Nebraska, wajiga xiga ee talaalka ayaa la filayaa inuu bilaabmo horaanta bisha Febraayo. Iowa wuxuu dhaafey 300,000 kiis oo wanaagsan oo COVID
Degmada Woodbury waxay ku dartay laba dhimasho oo kale oo la xiriirta COVID 24-kii saacadood ee la soo dhaafay wadar ahaan 175 tan iyo bilowgii cudurka faafa. Waxaa jiray 46 kiis oo dheeri ah. Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa soo warisay in 10 qof oo kale oo Iowans ah ay u dhinteen cudurka in ka badan 4,200 (4,232) iyo ku dhowaad 1,900 xaaladood oo dheeri ah wadar ahaan 300,000 natiijooyin tijaabo oo togan. In ka badan 50 gobol oo Iowa ah waxay leeyihiin celcelis celcelis ahaan 14-maalmood oo macquul ah oo ka sarreeya 15%, heer tilmaamaya faafidda fayraska bulshada ee muhiimka ah. Taas waxaa ka mid ah Degmada Woodbury oo leh 15.4%. Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu leeyahay waji qariya, masaafadaada iska ilaali, gacmaha iska maydh, guriga joog marka aad jiran tahay, iskana ilaali shirarka aan muhiimka ahayn. Saddex xubnood oo dhawaan loo dhaariyey aqalka Mareykanka kana soo jeeda gobolka Iowa ayaa sheegaya in ay "maya" u codeyn doonaan xil ka qaadista madaxweyne Donald
Jeegaga kicinta federaalka ayaa imanaya xisaabaadka bangiga ee Iowans iyo sanduuqyada boostada, halka kuwa wax khiyaameeya ay rajeynayaan inay dadka ka dhaadhiciyaan lacagtaas - taas oo noqon karta dhowr boqol oo doolar. Afhayeenad uhadashay Better Business Bureau waxay leedahay Iowans waa inay taxaddar badan lashaqeeysaa cidkasta oo kula soo xiriirta oo ku saabsan lacagaha kicinta. Waxay leedahay si toos ah ha uga jawaabin ama ha uga jawaabin wicitaanka, qoraalka, ama emaylka, laakiin raadi macluumaadka saxda ah ee hay'adda dawladda oo toos ula xiriir. Xafiiska Better Business Bureau ayaa sheegaya in dadka wax khiyaameeya ay isku dayaan inay dadka ku dhaqaaqaan ka hor inta aysan ka fikirin xaaladda. Muwaadiniinta Iowa ee Horumarinta Bulshada waxay ugu baaqeysaa sharci dejiyeyaasha Iowa in ay ku bixiyaan keydka lacagta gobolka bilyan-doolar iyo dheeri miisaaniyadeed ee gargaarka aafada. Kooxda ayaa saakay isugu soo baxay banaanka hore ee xarunta gobolka. Kooxda ayaa ku baaqeysa
Sharci-dajiyayaasha gobolka ayaa ku soo laabtay Iowa Capitol maanta. Waxbarashada, canshuuraha, nabadgelyada ayaa ah ahmiyadaha ugu weyn ee sharci dejinta Iowa ee 2021 Waxaana ku soo biiray gudaha in ka badan 200 mudaharaadayaasha ka hortagga maaskaro. Boqolaal qof --- waa yar yihiin, hadday jiraan, iyaga ka mid ah oo wejiyada daboolaya --- ayaa maanta lagu soo buuxiyay Iowa Capitol rotunda. Waxay ka mudaaharaadayeen indho-shareerka iyo talaabooyinka kale ee caafimaadka bulshada ee loogu talagalay in lagu yareeyo faafitaanka cudurka cusub ee coronavirus iyo cudurka faafa ee COVID-19. Amarada caafimaadka bulshada ee Iowa ee hadda jira ayaa dadka uga baahan inay xirtaan waji-furka dadweynaha dhexdiisa markii ay ku jiraan gudaha iyo hareeraha kuwa kale in ka badan 15 daqiiqo. Laakiin hoggaamiyeyaasha sharci dejinta ee Jamhuuriga ayaa go'aansaday in aan looga baahnayn booqdayaasha Capitol in ay xirtaan wejiga wajiga. 150-ka xildhibaan ayaa ku shiray Aqalka Madaxtooyada iyaga oo aan lahayn
Warbixinta toddobaadlaha ah ee coronavirus-ka ee Sioux City Community School District ayaa muujineysa kaliya hal qof oo shaqaale ah oo baaris lagu sameeyay usbuuca ugu horreeya fasaxa qaboobaha. Laba-boqol ayaa ku maqan karantiil. Taasi waxay hoos uga dhacday qiyaastii 500 dhammaadka Diseembar. Ardaydu waxay leeyihiin ugu yaraan hal usbuuc kale oo ah barashada isku dhafan. Taasi waa halka fasalka lagu qabto laba maalmood usbuucii. Cusbooneysiinta ku xeeran qorshaha waxbarashada ayaa la filayaa inay timaado habeenka Isniinta kulanka xiga ee guddiga dugsiga. Guddoomiyaha Gobolka Iowa Kim Reynolds wuxuu soo afjaray xaddidaaddii isboortiga iyo isu imaatinnada madaddaalada maalin ay gobolku diiwaangelisay 59 dhimasho dheeraad ah oo uu sababay cudurka coronavirus, oo ay ku jirto hal dhimasho oo kale oo ka dhacday Gobolka Woodbury. Waxaa jiray 172 dhimasho sida laga soo xigtay Caafimaadka Degmada Siouxland tan iyo bilowgii cudurka faafa. Guddoomiyaha gobolka Nebraska Pete Ricketts ayaa
Tirada dadka ku nool Iowa ee leh COVID-19 ee dhintay ayaa kor u dhaaftay 4,000, iyada oo gobolka uu soo sheegayo in 61 qof oo dheeri ah ay dhinteen Arbacadii. Degmada Woodbury, waxaa ka jiray 94 kiis oo cusub oo lagu daray wadarta tirinta kiisaska 24-kii saac ee la soo dhaafay in ka badan 12,500 wadarta kiisaska, 171 dhimasho ah iyo 16.8% heer wanaagsan. Heerka tijaabada ee 14-maalmood wuxuu ahaa 13.5% usbuuc ka hor. Cudur cusub oo faafa oo faafa ee coronavirus oo laga helay shan gobol. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya inay u badan tahay inay sidoo kale ku taal Nebraska, inkasta oo aan weli la xaqiijin. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in culeyska cusubi uu quseeyo maxaa yeelay waxay u horseedi kartaa kororka isbitaalada la dhigo Nebraska. Culayska cusub ayaa horseeday xirnaashaha qaran ee England, fayraskana waxaa lagu arkay California, Florida, New York, Georgia, iyo deriska la ah Colorado. Xaakim heer federaal ah ayaa xukumay in magacaabista madaxweyne Trump ee dhir goynta
Wiil 19 jir ah oo u dhashay magaalada Sioux City ayaa lagu soo oogay dacwad la xiriirta toogasho ay ku dhinteen haweeney halka seddex kalena ay ku dhaawacmeen xaflad sannadka cusub. Booliska Magaalada Sioux ayaa sheegay in Christopher Morales lagu soo oogay dacwad cabsi gelin ah oo uu u adeegsaday hub khatar ah isla markaana uu ku socday hub ujeedo Booliska ayaa sheegay in Morales uu qof ku qasbay inuu galo guriga ku yaal xaafada Morningside, halkaas oo xaflada lagu qabanayay. Isaga iyo kuwa kale ayaa kadib dhowr xabadood ku dhuftay guriga. Sideed iyo toban jir Mia Kritis (Kree-tis) ayaa ladilay seddex kale oo dhalinyaro ahna waa la dhaawacay. Booliska ayaa sheegay in Morales uu wajihi karo dacwado dheeri ah. Kritis wuxuu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan Dugsiga Sare ee North. Maaddaama Siouxland ay u taagantahay cimilo jiilaal badan, Adeegga Cimilada Qaranka ayaa sheegaya in sannadka 2020 uu ahaa sanad qalalan Sioux City. Sannadku wuxuu ku dhammaaday in ka badan 20 inji oo roob ah.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay soo warineysaa seddex dhimasho oo kale oo la xiriirta COVID-19 oo ku nool Gobolka Woodbury Isniintii, illaa 171 tan iyo bilowgii cudurka faafa. Toddobaad gudihiis, Iowa waxay ku dartay 247 dhimasho iyo in ka badan 10,000 oo kiisas cusub oo coronavirus ah. Degmada Woodbury, waxaa ka jiray 17 kiis oo dheeri ah oo maanta la diiwaangaliyay iyo heerka tijaabada 14-maalmood oo ah 15.5%. Taasi waa boqolkiiba laba boqolkiiba toddobaad ka hor. Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu soo saaray warbixin isbedel toddobaadle ah oo muujisay waxoogaa koror ah boqolkiiba imtixaannada togan ee usbuuca dhammaaday 27-kii Diseembar. Warbixinta ayaa sheegtay horumarkii hore ee heerarka infekshanka ay u badan tahay inay ka dhasheen isu imaatinno yar yar iyo dadka wejiga duubtay. Si kastaba ha noqotee, xilliyada ciidaha shaqsiyaadka waxaa laga yaabaa inaysan ku dadaalin inay raacaan tilmaamaha. (South Dakota waxay diiwaan galisay in kabadan 2,000 oo kiis oo cusub hal
Tirada dhimashada ee Woqooyi-galbeed Iowa ee loo aaneeyay COVID-19 ayaa sare u kacday 13 shalay, saraakiisha caafimaadka bulshada ayaa ku dhawaaqay. 13-ka qof ee cusub ee dhimatay waxay ka yimaadeen toddobo degmo deegaan. Ma jiraan wax dhimasho dheeraad ah oo laga soo sheegay Waqooyiga-bari Nebraska ama Koonfur-bari South Dakota illaa shalay galab. Degmada Woodbury, waxaa jiray 55 kiis oo cusub oo lagu daray wadarta tirinta kiisaska 24-kii saac ee la soo dhaafay. In ka badan 12,000 xaaladood oo kiisaska coronavirus ee ugub ah ayaa soo ifbaxay tan iyo markii cudurku bilaabmay. Ma jiraan wax dhimasho ah oo cusub oo ka dhacda Gobolka Woodbury, sidaa darteed tirada dhimashada halkaas waxay sii joogi kartaa 164. Ma jiro wax macluumaad ah oo ku saabsan jinsi ama da 'dadka Siouxland ee shalay dhintay. Gobolka Ida wuxuu lahaa kororka ugu weyn ee dhimashada COVID1-19. Waxaa jiray afar dhimasho oo cusub oo ka dhacday Gobolka Ida, taasoo ka dhigaysa wadarta tirada dhimashada 26. Tirada ayaa ka
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa soo warisay 67 dhimasho dheeraad ah oo la xiriirta COVID-19 Talaadadii iyo ku dhowaad 1,500 kiis oo cusub oo ku saabsan coronavirus-ka cusub 24-saac gudahood. Shaqaalaha ayaa bilaabay inay dadka ku tallaalaan guryaha xanaanada ee Iowa, iyagoo keenaya rajo ah in qoysaska ay dhowaan booqan doonaan dadka go'doominta ah, in kasta oo ay qaadan karto toddobaadyo in lagu dhammaystiro hawsha tallaalka. Degmooyinka dugsiga Nebraska waxay ka shaqeynayaan sidii loo go'aamin lahaa inta shaqaalahooda ah ee doonaya tallaalka coronavirus, sidaa darteed saraakiisha caafimaadka ayaa diyaar u ah inay keenaan. Shaqaalaha iskuulku waxay ka mid yihiin kooxaha soo socda ee dadka loo qorsheeyay inay qaataan tallaalka ka dib shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo dadka degan xarumaha daryeelka muddada-dheer ee haatan is tallaalaya. Barayaashu waxay u badan tahay inay helaan tallaalka bilaha Janaayo ama Febraayo oo ay la socdaan jawaabayaasha koowaad iyo shaqaalaha kale
Adeegga Cimilada Qaranka ayaa sheegaya in duufaan jiilaal “saameyn leh” ay u soo guureyso gobolka habeenka Talaadada iyo Talaadada. Baraf dhexdhexaad ah ama culus ayaa la filayaa iyadoo 3 ilaa 7 inji ay u dhigan tahay Siouxland. Sababtoo ah duufaanta jiilaalka ee soo socota, waxaa jiray xaalado deg deg ah oo baraf ah oo loo soo saaray beelo badan oo ka tirsan Siouxland, oo ay ku jiraan Sioux City, South Sioux, Dakota City, North Sioux, Hinton iyo Norfolk, Nebraska. The Sioux City Journal ayaa soo warisay, Axadii waxay aragtay wadarta ugu yar ee hal maalin wadarta cudurada cusub ee COVID-19 in kabadan 2 ½ bilood oo ay kujiraan 17 kiis oo cusub. Maanta, waxaa jira 19 kale, oo wadar ahaan ka badan 12,000 tan iyo markii uu billowday cudurka faafa ee 163 dhimasho. Isbitaalada ayaa si joogta ah ugu xajistay 55 bukaan oo ku yaal Sioux City labada xarumood ee caafimaadka. Taasi waa ku dhowaad kala bar rikoorkii sare ee la dhigay 1-dii Diseembar. Heerka tijaabada ee 14-maalmood ee Gobolka
Digniinta Blizzard ayaa loo dhajiyay dhammaan Siouxland Arbacadii baraf, xoog, dabayl iyo qabow daran ilaa 9 fiidnimo. Waaxda saadaasha hawada ayaa sheegtay in magaalada Sioux City la filayay inay hesho seddex inji oo baraf ah. Duqa Magaalada Sioux Bob Scott ayaa soo saaray xaalad deg deg ah oo baraf ah. Baaqa deg-degga ah wuxuu mamnuucayaa dhigashada gawaarida ama ka tagida gaariga iyadoo aan lala socon dariiqa dariiqa barafka, oo ay ku qoran tahay calaamado buluug iyo cadaan leh baraf baraf wata. Baabuurtu waa inay dhigtaan dhinaca tirada lambarrada tirada yar ee wadada laga bilaabo Arbacada, Diseembar 23. Waa in loo raraa dhinaca dhinaca wadada laga bilaabo Khamiista, Diseembar 24 markay tahay 7:00 a.m. Haddii ay jirto calaamadda Baarkinka Baabuurta ee wadada, gawaarida looma oggola inay dhigtaan halkaas waana in loo raraa meel kale. 15 qof oo kale oo ku nool Iowa ayaa u dhintey cudurka loo yaqaan 'coronavirus' waxaana jirey ku dhowaad 2,000 oo cudur oo la xaqiijiyey muddo 24 saac
Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa sheegay in kiisaska COVID-19 iyo isbitaalada la dhigaayo ay kusii jeedaan wadada. Waxay ku qanacsan tahay xayiraad dheeraad ah oo loo soo saaray Iowans bishii hore. Reynolds waxay ku boorineysaa dadweynaha inay raacaan tilmaamaha caafimaadka, oo ay ka mid yihiin ka fogaanshaha isu imaatinka inta lagu jiro fasaxyada. Reynolds waxay sheegaysaa in kabadan 8,400 howlwadeenada daryeelka caafimaadka safka hore in laga talaalay COVID-19. Toddobaadkii hore, saraakiisha gobolka waxay rajeynayeen inay helaan 26,000 qaadasho oo ah tallaalka Pfizer. Reynolds wuxuu tilmaamay khalad qorsheyn oo sababay qiime aad u sareeya oo ku saabsan qoondada gobolka. Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa ayaa soo warisay 64 dheeraad ah oo COVID-19 ah oo ku dhimatay Talaadadii, waxaa jiray in ka badan 1,300 oo kiisas wanaagsan oo dheeraad ah 24-saac ee la soo dhaafay. Tallaalada xarumaha daryeelka muddada-dheer iyada oo loo marayo barnaamijka farmasiga ee dowladda
Ka dib markii la soo sheegey 238 dhimasho sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19, gobolka Iowa lama diiwaan gelin dhimasho cusub 24-saac gudahood. Waxaa jiray 1,900 kiis oo cusub maaddaama faafitaanka fayrasku uu ku sii yaraanayo gobolka. Waxaa jiray 62 kiis oo cusub oo ka dhacay Degmada Woodbury iyo sagaal ka tirsan Degmada Dakota. Gobolka ayaa ku soo warramey 701 qof cisbitaalada jimcihii iyo 96 bukaan ah oo qaba COVID-19 oo la dhigey 24-kii saac ee la soo dhaafey, labada lambarba way ka hooseeyaan kaliya usbuuc ka hor. Deegaanka, waxaa jira 60 bukaan oo ku kala yaal labada isbitaal ee Magaalada Sioux. Dhakhtar sare oo ka tirsan waaxda gurmadka ee UnityPoint-St. Luke’s ayaa sheegay in dadweynuhu u baahan yihiin inay laba jibaaraan raacitaanka shuruudaha amniga si loo yareeyo faafitaanka cudurka. Degmada Iskuulka Bulshada ee Magaalada Sioux waxay soo saartay warbixin todobaadle ah oo ku saabsan kiisaska COVID-19 waxayna markii ugu horaysay sidoo kale liis garaysay ardayda iyo
Ma cadda sababta ay Iowa u heli doonto qadar yar oo ah tallaalka coronavirus-ka marka loo eego markii hore ee ay ballan qaaday dowladda federaalka. Laakiin gobolka ayaa horay ugu sii soconaya qorshayaal lagu dejinayo xayiraadaha, iyadoo la soo sheegayo ku dhowaad 100 dhimasho dheeraad ah. Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa soo saartay bayaan fiidnimadii Arbacada oo sheegaysa in qoondaynta gobolka la dhimi doono ilaa 30%. Bayaanka ayaa lagu xusay in qeybinta sidoo kale hoos loo dhigay gobolada kale. Hay'addu ma aysan sharraxin sababta qoondayntu u yaraanayso. Iowa ayaa ka warbixisay dhimashada 97 dheeraad ah maalintii Khamiista iyadoo tirada dhimashada gobolka ay korortay oo ay gaadhay 3,451. In ka badan 262,000 ayaa laga helay cudurka, oo ay ku jiraan 70 kale oo ka tirsan Gobolka Woodbury. Waxaa jirey 151 dhimashooyin ka dhacay Degmada Woodbury. Isbitaalada gudaha ayaa ku dhacay 59 ka dib markii ay sare u kaceen seddex lambar laba todobaad ka hor. Afartan ka mid ah gobolka Iowa
Gov. Kim Reynolds ayaa ku dhawaaqday inay fududeyneyso xaddidaadaha qaar iyadoo ka jawaabeysa tirada sii yaraaneeysa ee cudurada cusub ee COVID-19 iyo isbitaalada la dhigo. In kasta oo qiimayaashani ay wali aad uga sarreeyaan kii ugu sarreeyay ee guga. Reynolds wuxuu sheegay in laga bilaabo berito makhaayadaha ay dib ugu laaban karaan saacadahoodii caadiga ahaa isla markaana la xadidi doono xadidaada kulamada. Intaa waxaa sii dheer, tirada daawadayaasha loo oggol yahay dhallinta dugsiga sare iyo dhacdooyinka cayaaraha qaangaarka ah ayaa la kordhiyay si loogu daro dhammaan xubnaha kaqeyb galayaasha. Reynolds waxay tiri waxay kudari doontaa xayiraad cusub hadii tirooyinku markale bilaabaan inay sii kordhaan. Baahinta cusub wali waxaa ku jira waajibaadka maaskaro gudaha ah oo qayb ahaan ah. Waxay socon doontaa illaa 8 Janaayo. Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay soo sheegaysaa 14 kale oo Iowans ah inay u dhinteen COVID-19 dhibaatooyin 24-kii saac ee la soo dhaafay, waxaa jiray ku
Jawaabta fal-dambiyeedyada kiisaska coronavirus, ardayda iskuulada dadweynaha ee Magaalada Sioux waxay dib ugu laaban doonaan dugsiga 4-ta Janaayo qorsho isku dhafan oo barasho. Kulankii xalay guddiga dugsiga ayaa isku raacay nooc waxbarasho oo isku dhafan oo la qaban doono labada toddobaad ee ugu horreeya bisha Janaayo, marka fasaxa fasaxu dhammaado. Taas macnaheedu waa labada toddobaad ee ugu horreeya iyo labadii usbuuc ee ugu dambeeyay ee simistarku waxay noqon doonaan kuwo isku dhafan. Qiyaastii nus ardayda waxay tagi doonaan iskuulka shaqsi ahaan Isniinta iyo Khamiista, qeybta kalena Talaado iyo Jimce. Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa ayaa diiwaangelisay 67 dhimasho dheeraad ah sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 iyo in ka badan 1,300 xaaladood 24-saac gudahood. Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu ku daray 41 xaaladood oo dheeri ah Gobolka Woodbury in kabadan 11,500. Waxaa jiray 145 dhimasho intii lagu jiray aafada. Degmada Dakota waxay soo tabisay kaliya 7 kiis oo kale
Raritaankii ugu horreeyay ee tallaalka COVID-19 wuxuu yimid dhammaan saddexda Gobol ee Siouxland. Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu leeyahay Degmada Woodbury waxay heli doontaa kudhowaad 2,000 oo qiyaas oo ah tallaalka Pfizer (f-eye-zer) maalmaha soo socda ee shaqaalaha daryeelka caafimaadka safka hore. Qiyaaso kale ayaa ku imaan doona wejiyo iyo shabakada farmashiyaha ee qaran ayaa u qeybin doonta qiyaaso dheeri ah xarumaha daryeelka muddada-dheer. Marka tallaalka Moderna (muh-dern-uh) uu helo tallaabada hore waxaa jiri doona 400 qiyaasood oo loogu talagalay shaqaalaha EMS ee Gobolka Woodbury. Degmada Dakota looma qorsheynin inay hesho tallaalka wali. Laakiin, markay sidaas tahay, shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo dadka deggan xarumaha daryeelka muddada-dheer iyo shaqaaluhu waxay heli doonaan mudnaanta koowaad. Tallaalka waxaa lagu qiyaasaa inuu heli karo dadweynaha guud bisha Abriil. Saraakiisha caafimaadka ee maxalliga ah waxay yiraahdaan iska ilaali khiyaanooyinka ku
Qorshayaasha qeybinta tallaalka waxaa ka wada hadli doona gelinka dambe ee Isniinta saraakiisha caafimaadka bulshada ee Siouxland. Waaxda Caafimaadka Degmada Siouxland iyo Waaxda Caafimaadka ee Degmada Dakota waxay qaban doonaan shir jaraa'id gelinka dambe ee Isniinta Machadka Amniga ee Galbeedka Iowa Tech, si ay u bixiyaan macluumaad la xiriira qorshooyinka tallaalka COVID19. Shirkaas jaraa’id waxaa lagu wadaa 1:30 pm. Isniinta. Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu sheegayaa inay jiraan 88 xaaladood oo lagu daray wadarta tirinta kiisaska 24-kii saac ee lasoo dhaafay. Degmada Woodbury wali waxay la kulmaysaa faafin ballaaran oo bulshada ah oo ah COVID-19 waxaana jira isbitaalo la seexiyay oo 66 la xiriira coronavirus-ka Siouxland. Coronavirus wuxuu kusii kordhayaa Iowa. In kabadan 1 kumanaan kun oo reer Iow ah ayaa u dhintey COVID-19, sida ku cad falanqaynta Des Moines ee waaxda Iowa ee xogta caafimaadka bulshada. In ka badan 90% dadka dhintay waxay ahaayeen 60 ama ka weyn. Waaxda